Cristiano Ronaldo Oo Juventus Ka Codsaday Saxeex Cusub – Heemaal News Network
Cristiano Ronaldo Oo Juventus Ka Codsaday Saxeex Cusub
Wakiilka weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo oo lagu magacaabo Jorge Mendes ayaa lagu soo warramayaa inuu kooxdaasi u sheegay go’aanka kama dambaysta ah ee ciyaaryahanka uu gadh-wadeeenka ka yahay.
Ronaldo ayaa ka cadhaysnaa qaabkii gaabiska ahaa ee uu kooxda usoo maamulay tababare Andrea Pirlo kaas oo sababay inay horyaalka oo ay doonayeen markii 10-aad oo xidhiidh ah seegaan halka ay wareega 16-ka kaga hadheen Champions League.
Cristiano Ronaldo ayaa wacdarro kusoo dhigay tartanka haatan socda ee Euro 2020 isaga oo wali hoggaaminaya gool dhalinta tartankaas isla markaana muujiyay inuu wali isaga oo 36 sano jir ah wax badan ku deeqi karo.
Ronaldo ayaa lala xidhiidhinayay kooxaha Man United iyo PSG balse haatan ayuu doorbidayaa inuu Ballon d’Or markiisii 6aad ku raadiyo horyaalka Talyaaniga iyo la shaqaynta tababare Maxi Allegri.
Ronaldo ayaa isha ku haya hanashada abaalmarintaas sharafta leh si uu usoo qabto Lionel Messi oo uu loolan kubaddeed ka dhaxeeyo isla markaana lix jeer isagu hantay.
Sida uu hadda sheegayo wargeyska La Gazzetta dello Sport oo go’aanka Ronaldo ee loo dhag taagayay soo saaray wakiil Jorge Mendes ayaa u sheegay Juve inuu xiddigiisu doonayo qandaraas cusub halkii laga filayay inuu kooxda ka baxo.
China Is Radically Expanding Its Nuclear Missile Silos
Caruur ku Dhimatay Dab ka kacay Xaafad ka Tirsan Hargaysa.(Sawiro)
Chelsea Oo Ku Guulaysatay Koobka Horyaalka Naadiyadda Yurub
Heemaal May 29, 2021
Mikel Arteta Oo Qirtay In Uu Kooxdiisa La Daadagay “Koox Liidataan Nahay”
Heemaall April 4, 2021
Manchester United Oo Guul Ka Gaadhay Burnley
Heemaal April 18, 2021